डा.वाग्लेको सहयोगमा लागि उपचार कोष | SouryaOnline
डा.वाग्लेको सहयोगमा लागि उपचार कोष
सौर्य अनलाइन २०६९ चैत १ गते १३:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १ चैत । ओम हेल्थ फाउण्डेसन र स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले डा.चित्रप्रसाद शर्मा वाग्लेको उपचारका लागि सहयोग रकम संकलन गर्न संयुक्त रुपमा कोष स्थापना गरेका छन् ।
डा.वाग्लेले विगत आठ महिनादेखि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राजीव गान्धी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा इपेन्डिक्स क्यान्सरको उपचार गराई रहेका छन् । डा. वाग्लेलाई महिनाको २ पटक अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने भएकाले हाल भारतमै कोठा भाडामा लिएर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ । उनले २५ वर्षको चिकित्सा पेशा जीवनमा पढ्नका लागि आठ वर्षबाहेक सबै समय गाउँमै बसेरजनताको सेवा गरेका थिए । रुपन्देही मुर्गीयाका डा.वाग्लेले १७ वर्ष सेवामध्ये १२ वर्ष त अर्घाखाँची, पाल्पा र प्यूठानमा मात्र बिताएका छन् ।
भारतको अस्पतालमा सुरूमा १२ राउण्ड केमो चलाएर पहिलो शल्यक्रिया गर्दा उनको २५ लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । केही समयपछि दोस्रो शल्यक्रिया र त्यसपछि पुनः १२ राउण्ड केमो चलाउनुपर्ने छ । यसका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आजसम्म उनको उपचारका लागि अत्यन्तै न्यून सहयोग प्राप्त भएको परिवारजनको भनाई छ ।
सोही कारण कोष स्थापना गरीएको ओम हेल्थ फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले जानकारी दिए । ‘डा.वाग्लेको उपचारका लागि आ–आफ्नो क्षेत्र बाट सक्दो सहयोग गरीदिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सहयोगका लागि सबैमा अनुरोध गर्छु ।’
उपचार सहयोगका फाउन्डेसनले ५१ हजार, स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले २६ हजार, ओम हस्पिटलका चिकित्सकहरुबाट २७ हजार रुपियाँ राखेर कोष स्थापना गरिएको स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका प्रधानसम्पादक अनिल न्यौपानेले जानकारी दिए । कोषमा निर्माण व्यावसाय महासंघले पनि ५१ हजार रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । कोषमा सहयोग गर्न चाहनेलाई सहजहोस भनेर हुने ‘ओम हेल्थ फाउण्डेसन डा.चित्रप्रसाद हेल्थ कोष’ नेपाल बैंक लिमिटेड चाबहिल शाखामा ००६४–११–००१३४८२ को खाता समेत खोलिएको छ ।